PUNTLAND oo War kasoo saartay Baarlamaanka cusub ee Jubbaland | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
PUNTLAND oo War kasoo saartay Baarlamaanka cusub ee Jubbaland
Aug 13, 2019 - 23 Aragtiyood
Garoowe ( Kalshaale ) Warsaxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyada Maamulka Puntland ayaa hambalyo loogu diray Xildhibaanada Cusub ee Baarlamaanka Labaad ee Jubaland, sidoo kale Puntland waxay bogaadisay sida ay u socoto hanaanka Doorasho ee Jubaland.
Puntland ayaa dhowr jeer oo horay uga digtay in Faragelin lagu sameeyo arimaha doorashada ee Galmudug iyo Jubbaland.
Waxayna Arintan ayaa kusoo beegmaysaa iyadoo Jubbaland looga dhowaaqay Laba Baarlamaan, oo mid kamid ah uu Taageero ka haysto madaxwayne Axmed Madoobe iyo maamulkiisa, Halka midka kale ay shaaciyeen Dadka kasoo Horjeeda.
Akhriso war-Saxaafadeedka Puntland kasoo baxay
Xildhibaanada Cusub ee Jubbaland ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada Kismaayo, Waxaana Xildhibaan Fiqi oo Hambalyo u diray uu sheegay inay saaran tahay mas’uuliyad culus “waxaad gacanta saarteen kitaabkii ilaahay, Hawlaha idin horyaallana waa weyn yihiin Allaha idin fududeeyo.” Ayuu yidhi.
Pudhlayn taageerada ay siinayo beenta uu Axmad Geeda Naar dhoodhoobey waa daanyeernimo lagu ladhay nijaasnimo.
Dhabayaco qabiil baa wada laakiin nidaam iyo kala damayn uma jeeddo iska daa nabadayn iyo wada noolaasho ka dhacda Jubbaland.
Haddii ay nabadda iyo horumarka Soomaalida ama Jubbaland doonayaan gogol nabadeed ayay dhigi lahaayeen dadka isku haya Jubbaland.
Dhabayacadan maamulka Garowe ee Islaaxaysan waa daanyeer u baahan inay bartaan dowladnimo iyo maamul wanaag.
Dhabayaco ayaa siyaasiyiin ah halkaa ku idlaato.
Down all Soomaali traitors
Rooti Maraq doon ah iga dheh,
awood iyo Xaniiyo IS CARAADIYO hadey KUGU u YAALAAN Tag Tukoraq oo saacad kayar u jirto Garowe. Taageero iyo Taag waxaa kaaga baahan Laascaanood iyo Ceerigaabo.
Car Burtiinle soo dhaaf @ Dalxa Bariyow
Hambalyo ayaan reer Jubaland hawada u marinayaa. Si wanaagsan oo sharciga waafaqsan ayay baarlamanka u doortay, doorashaduna ons sidaa oo kale u dhacdaan u rajaynayaa. Oo weliba AXMED Madoobe ay dib u doortaan.
I am proud to be a Somalilander. 💪👍💪
Nacas yahoow ragga ka dhex bax. Wax uu doonayo iyo waxa uu diidan yahay aan la kala garan kareen.
SAC GUSLEH, dee bax dameerada was. PUNTLAND hadii aysan taageerin JUBBALAND yee taageertaa.
PUNTLAND ma taageerto keliya JUBBALAND. Dhamaan maamul goboleedyada oo dhan ay taageerta.
Nacas yahoow meesha nac nac da kala dhex bax, ama sida ragga u dood oo dood wanaag la imow.
Waa ku aqaan… CAWLAYAHAN baad tahay.. Qabiil baad rabtaa in aad wax ku noqoto.. OOMAAR ma iman karo. KISMAAYO rag dhiiga u soo cabay ayaa haaysta.
Naara afuuf gabdhihii shiikhaashta gurmad bay u baahan yihiin waxa karbaasha
Ugaandhiis halkaasa lagaaga baahanyahay tukaraq somaliba joogta haku heshiyaan ama
Haysku dileen adigu horta astur cawradaada imisa ugaandhiisaad abti u tahay
Mooryaan ibnu mooryaan
Waa sida uu sheegay suldaan Ali Zubeer.
Maamulka Garoowe waa u munaafaqnimo hambalyadaan eey u dirayaan degmada Kismaayo iyo ninka hogaamiya ee Ahmed Madoobe. Waxeey ku heleen baadil xubnaha laga siiyay maamulka ee uu Ahmed Madoobe hogaamiya, sababtoo ah, cajaladii qabiilka ayeey galiyeen odayga.
Barwaani queen, daanyeeryahow suldaanka ka leexo, hadii uu qabiilkaada Majeerteen daanyernimadooda tilmamay maahan in aad cabaado. Runta ayaa lasheegayaa, iyo waxa u dan ah Somali oo dhan.
Nasiib darro, madaxda dowladda dhexe, waa ku fashilmeen, sidii eey “containment” amaba xadidaad uGu sameeyn lahaayeen maamulka Majeerteen ee Garoowe siyaasad xumadda madaxweeynaha iyo ra’iisalwasaaraha dowladda dhexe dartood. Hadde, maamulka Garoowe, inta uu soo dhaafay Garoowe, ayuu Dhuusamareen, Kismaayo, macaal Xamar lugta kula jirraa, oo uu qasayaa. Ragga hogaamiya dowladda dhexena, meel iyo si eey wax u maareeyaan waa garan la’yahiin.
Pudland wexey rabtaa in uu kismaayo dagaal ka dhoco. Waayoo ayaga waxba kama soo gaarayaan.
War nimaan wax kuu tereyn yuusan idin hodin.
Waa ceeb inaad ceydo Dhabdhaha shiikhaasha, ileen ma taqaanid qabiilkeyga ( only waxaad ka maqasho Majeerten ayaad tunka ku qaadaane –
Marka labaad adiga laguu caayi mahayo Gabdhaha Dhulbahante ileen ayagaaba geesiyaal ah.
Marka sedexaad ka xishoo golaha ilaa aad Habar-Jeclo ka saareyso Tukoraq. Waliba ma sheegin inuu Majeerten idiin xulo Xildhibaanada.
– aniga miyaa gacmaha ku heyso adaad xitaa dhagax tuureyso waa intaas oodba dhiman waydaane.
Caro badan ayaa kaa muuqato
Habraaca federalka hala ilaliyo dalku waa federal
Xildhinada is xambarka ah waa la isga iman waa in
Ay somalida barata is xukunka iyo isu tanasulka
Dhilo,futo qadhmuun la wareegaysaa…
Maxaa kaa kalay KABLALAX iyo dhashooda, waxeey rabaan ha is-dhaheeni.
Mase SULTANKA aad moodeeey in khaniisiinta wax ka raadsado.
NACATULLAAHI CALEEEK YAA QOOMA LUUD.
Caaydaase waan iska daayey, laakeen, waxaase kale markaad aragto beey khasab kugu noqonaysaa in aad la caaytanto.
Tallow, haddi maantay KISMAAYO haaysan lahaayeen, SEERAAR, GOOOBAALEEE, BARRE HIIRAAALE, maxuu dhihi lahaa..
Soo ma dhiheen KISMAAYO waa guri HIRAAB..
MAKHNUUD IBNO MAKHUUND….KHANIIS IBNO KHANIIS…
Waa bilaabey, wiil Qardho
Horaan u sheegay inaadan igu sirayn – GOOGLE QURAAN COPY CUT.
– Xitaa adeer Ahmed Somali wuu kuu sheegay inaadan DAAHIREYN hadaad kun Ayaat soo copy gareyso
* Saqiir Majeerten sir la’aan ma dhinto.
Saaxiibooow, waxaan ku moodaayey in aad tahay nin oday ah, in kastoo aan kuu jeedo in aad qasaasaqday.
Maad isa su’aasho, maxaa keenay caayda??
Caayda, waa la iga keenay.. Waana waajib in aad is-difaacdo.
Midda kale, maxaa ku tusay caaydaydaa, tan kalina aad u arki weyday…
Mase waxeey kaa tahay intaase hiilo..
Xaashaa, ani nina ma caayin.. Abtigeey ALI ZUBEEN baan naqday hadalkiisa…
Nina aan u arko in uu yahay HAWIYE, baa halkaas ka soo booday…
Marka maxaad i leedahay in aysan xaq igu lahayn in aan is-difaaco??
GUDKAA MA QODBA WALIGAA XAQ KUMA AADAN HADLIN..
Fiiri, googale hadii aad qur’aanka kala soo bixi kartid…
Ogsoonoow waa cilmi la is-dheer yahay..
AL-XAMDULILAAH, ani 5 luqoood aan ku hadlaa… Carabiga ayaa ka mid ah.. Af-carbeedka waxaan ku bartay markii aan quraanka xafiday oo tafsiirkiisa wax ka bartay.
Ka warran waligeey dugsi af-carabi lagu baranaayo ma tegin….
Lakeen, quraanka ilaa 3 jeer dhameeyey.. hadana hadda aan kula hadlaayo ma ahi xaafid quraan…
Marka, adiga waa u dhaamaa…. waayo, af-carbeedkeena waa aqaan.. quraanka adi waa ku dhaamaa..
ADI ODAY QASAASAQAY BAAD TAHAY.. XATAA XAARKA IYO GAADIDA SIDA LA ISAGA DHAQO MA TAQAANI..
WAXAAN HUBAA IN AADAN WASI QAADKA AQOOON…
INTAAS OO DHAN KA IMMOW, DIYAAR BAAN U AHAY MASALO DIINI IN AAD I WEYDIISO…
SIDOO KALE ANA AAN KU WEEYDO.. BALKEENA DIINTA KU ROON SOOMAALI WEYN HA ARAGTO MAANTAY
“CASAAADO” aad ka cadhootay waa kuma aan kula ga-gabiyee. Ma Cali Caac/Zubeer baad u jeedhaa?
Hadaan Fahmay “Daayeer Caddado ayaad u jeedaa” Waa daayeer majnuuna!
Weliba daayeerada xun oo dhan isgaa dhalay!
Daanyeer daanyeer iyo dhillooyin iska dhaleen ayaad tahay.
Kuwa Daaroodka sheegta ee meeshaan soo gala, ee been been abti abti kuu dhaho, waa daanyeero kale, oo munaafaqiin ah. Iyaga oo og, in aad Majeerteen tahay, ayaad isku ogtahiin in aad ku qaraabato Barwaani Ayaan ahay. Daanyeer.
Midda kale, inyar maahanee, ragaas Daaroodka kula sheegto, iyo gabadhii Farxiya, qof waligiis kuu sheegay in aad munaafaq diinta Islaamka ka been sheega, oo rabba in uu dadka ku qaldo tahay.
Kollay anniga waan ku ogahay waxa aad tahay, waana kuu sheegi in aad tahay qof eey dhashay naag dhillo ah, iyo nin khaniis ahaa, waana tan aad marwalba uga hadasho khaniisnimo, iyo futo, iyo gus weeyso qabba. Nacalatulaahi caleeyk iyo waxii firkaada ah. Bal kawarrama, gus weeysa qabba iyo waxaas qof ku hadlaya, oo misana aadaabtaas leh, oo qur’aan yarroo uusan ku camal fallin rabba dadka caqliga xun in uu ku qaldo.
Faaìdada ugu weyn uu keenay DANI waa inaan Garowe mardambe lagu qaban shir Somali. °Sideedaba beesha MJ waxay caada u leedahay inay amminsantahay inaanba NIN jilcan oo wax-ma-tara ka dhalan TAANA waxay keentay inaan dirac kasta oo ka dhasha aan maanta dheg loo dhigin. °Deni wuxuu garawaayay inuu Madax u yahay deegaan ay Beel kaliya degto WUXUU garawaayay Hiilka uu shacabka Somali iyo dawladdiisu ay u galeen oo wuxuu ismooday Wuxuusan ahayn. °Beesha MJ waxaan kula talina INAY si degdega ISU dhaafiyaan NINKAAN sumcadoodi la degay oo ay Keenan mid ka KARTI badan oo isla Cuthmaan Maxamuuda oo dhamaystira mudadi Kaltanka HABA AHAADO wiilkaan ANIGU ka cabsado ee DIYAANO. WBT
Waryaa Ilaahay Iyo Ummadiisaa Yaqanaa..
War maxaad isku haysaan idinkaabaa reer SOMALIYA isku wada ahaayeee?!
Ma qabiil baa isku eryanaysaan wali?!
Oo hadiibaa idinkii sidaan tihiin sideebaad ku rabtaan Midnimo Soomaliyeed?!
Soo qabo intaan ilaawaay…..
War bal idinkoo ONE..HAL..MID ah, aynu wada hadalnee isasoo habeeya!!
Abwaan sOmalilander, hadde ogoow waxaa nala soda; Ciise, Gadabuursi, Warsangeli, Dhulbahante, Waddani iyo 67% oo ah jufooyinka kale ee Banu Isxaaq. °Adiguna waxaad ku Jidda kuwa LIQLIQANA oo weliba u janjeera dhanka Somaliweyn. °Adeer bahasha iska baandhe!!!. WBT
jidda=jirta. ALLAA WEYN.
Nijaasnimada aad ku hadaaqday waxay tusinaysaa inaad tahay munaaqif ijtimaaci oo waxba iskuma fala ah.
Dhabayacana save in yar waa niman ku mudhxay nifaaqaada oo kale. Wallee Suldaanka ma siraan iyaga iyo Iidoorka.
Taageeradooda Axmad Dhuxulayste waa munaafadqad qabiil illayn haddii ay u danaynayaan reer Jubbaland waar ka daa duminteeda ayay odhan lahaayeen.
Midna ogow af xumada waa calaamad munaafaqad waayo nabiga wuxuu yidhi muminka ma ah mid af xun ama dadka ceebaysta.
Diinta baro deetana ku camal haddaad wax isku falayso.
Ugu dambayn Suldaan Ali Zubeer isaga oo ugu dhow dadka Mr Dhuxulayste Soomaalinnimo ayaa deeqda adigana qabyaaladda uu yidhi nabiga scw way uraysaaye ka taga ayaad ku qubaysataa.
Baraawaani wuxuu golahan ka yahay waa la ogyahay. Wakhtiga ha isaga dhumin. Waanan ku mahadsan tahay difaaca iyo sixitaankas aad ku samaysay nijaaska ka been sheega diinta iyo dhaqanka ragga Soomaaliyeed.
Suldaan Zubeer, haye, bro, waad mahadsantahay. Midkaan barwaani queen waa lagu dambaabaa, waa shaydaan waalan.